Hack AirTags, ipa MacBook Mhepo uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Jordi Gimenez | 16/05/2021 11:00 | dzakawanda
Zvinotarisirwa kuti svondo rinouya panogona kuve nenhau nezveApple's AirPods matatu asi kwete nezveAirPods chete, kune zvakare kutaura nezve mukana wekuti Apple Music inowedzera Hi-Fi kurira kwemhando yepamusoro. Asi ikozvino tichaisa ramangwana padivi kuti titarise pazvinyorwa zvekare. Uye ndiyo vhiki ino yataive nayo akasiyana akakosha nhau muApple nyika uye vamwe vavo tirikurangarira nhasi Svondo nemi mose.
Yekutanga yenyaya idzi ndeye iyo «kubiridzira» yeAirTags. Iyi ndeimwe yenyaya idzi dzinogona kufadza vashandisi asi izvo musimboti hatifanirwe kunetseka nezvazvo, uye ndezve chaiyo "isina kusimba" kubira iyo isingatombovhundutsa.
New MacBooks yakamirira kuburitswa munguva pfupi.
Vhiki rino kwaivewo ne kupa izvo zvinogona kuve zvitsva MacBook Mhepo yegore rino. Kunaka kwe Jon Prosser, anga ari mutariri wekuratidza zvinogoneka dhizaini yeApple MacBook Air iyi uye zvinoita sekunge vari kuzvifarira zvakanyanya kunyangwe chiri chokwadi kuti hatisi kutaura chero nguva kuti ndiko kugadzirwa kwekupedzisira.
Iwe unofunga kuti Apple inogona kuvhura mutambo wemutambo? Zvakanaka, panoratidzika kunge paine runyerekupe rwekuti iyo Cupertino kambani ichave ichida kuvhura koni kana kuti inenge ichishanda pairi. Vhiki rino takaona nhau.
Kupedza tinoda kugovana newe nhau dzese yekutanga Geekbench zvibodzwa ye 24-inch iMac ine M1 processor. Semupambi uye kana zvirizvo zvausina kuverenga nhau pamberi Isu tinokuudza kuti icho chikamu chakakwirira chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Hack AirTags, ipa MacBook Mhepo uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac